Indlu yaseCreekside-2 imizuzu ukuya eHunter Mtn
Uluhlu olutsha! Eyona nto ingcono yeeCatskill kufuneka ibonelele, iimbono ezimangalisayo kunye nezandi zomlambo ezipholileyo. Yonwabele yonke le nto kwigumbi lethu lokulala eli-3, indlu yokuhlambela emi-3 enedesika egqunyiweyo, imeko ye-tub eshushu yobugcisa kunye ne-oveni yepizza. Ibanjelwe kwindlela yabucala kodwa yimizuzu emi-2 kuphela ukusuka kwindawo etyibilikayo, umgama wokuhamba ukuya kwiHunter Mountain Brewery, umgama omfutshane ukusuka kwiindlela zokuhamba intaba, amachibi, iiKaaterskill Falls kunye negalufa.
Iiyure nje ezi-2 ukusuka eManhattan kodwa umhlaba kude nendlu yethu yalungiswa ngothando kunye nomzamo omkhulu. Idizayinelwe ukukonakalisa inomgangatho omkhulu one-BBQ grill, i-oveni ye-pizza, iindawo ezi-3 ezihlukeneyo zokuhlala kunye nebhafu enkulu eshushu. Thatha iimbono kwizitulo ezihleliyo okanye uphumle kwi-tub eshushu ngelixa umamele isandi somlambo ongezantsi.
Ngaphakathi, ikhitshi inayo yonke into oyifunayo ukupheka ukutya kwakho .I-Miele coffee maker, i-Keurig okanye umenzi wekofu oqhelekileyo, kukhetho lwakho. Ngobusika obusondela kwindawo yomlilo yamatye inika ukufudumala kunye nentuthuzelo.
Amagumbi okulala amabini akumgangatho wokuqala (Ibhedi yokumkanikazi kunye nelinye lineebhedi ezimbini ezingamawele) ngelixa igumbi lesithathu lokulala kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu kunye neshawari kumgangatho we-2. Kwakhona kumgangatho we-2 kukho indawo yeofisi enedesika kunye nendawo yokufunda.
Imozulu embi okanye awuziva ufuna ukuphuma endlwini? Umgangatho ongaphantsi wenzelwe ukonwabisa iiyure ngoomatshini bebhola ababini, itafile yepool, ihoki yomoya, ibhokisi yejuke kunye nomabonakude omkhulu wescreen.
Ngasemva kweyadi kukho iqula lomlilo elinezitulo ezikhululekileyo ezijikeleze kuyo, ii-hammocks ezininzi zikulindile.
I-AC kwigumbi ngalinye lokulala, isantya esiphezulu se-intanethi. Zonke iilinen ziyi-organic bamboo.
Kuyo nayiphi na imibuzo ndiyifowuni okanye isicatshulwa kude.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hunter